Fahazavana maharitra hatramin'ny farany
"Ary nahare feo avy tany an-danitra aho nanao hoe: `soraty: sambatra ny maty, dia izay maty ao amin'ny Tompo hatramin'izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin'izay nisasarany izy; fa ny asany manaraka azy."- Apôk. 14:13.
Notolorana fahazavana feno mitafotafo ny olona amin'izao andro farany izao. Na ho voaaro ny aiko na tsia, dia tsy hitsahatra hiteny ny asa soratro, ary handroso hatrany ny asako arakaraka ny haharetan'ny fotoana. Voatahiry an-takelaka ao amin'ny birao ireo asasoratro, ary na dia ho faty aza aho, fa ireo teny ireo kosa, izay nomen'ny Tompo ahy, dia mbola ho velona sy hitohy hiteny amin'ny olona hatrany. Saingy voatahiry indray ny heriko, dia mbola manantena ny hanohy asa mihoatra, izay tena ilaina aho. Angamba mety ho velona aho mandra-piverenan'ny Tompo indray; kanefa, raha tsy izany, dia matoky aho fa izao no holazaina ny amiko: "Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin'ny Tompo hatramin'izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin'izay nisasarany izy; fa ny asany manaraka azy." (...)
Misaotra an'Andriamanitra aho noho ny fitiavany mahatoky, sy ny fitarihany sy ny fitantanany isan'andro. Feno ny fotoanako noho ny asasoratro. Maraina sy alina no anoratako ireo izay nampahitan'ny Tompo ahy teo anatrehako. Adidy iantsorohako eo amin'ny asako ny hanomana vahoaka hijoro amin'ny ny andron'ny Tompo. Azo antoka ny teny fikasan'i Kristy. Tsy haharitra ela ny fotoana. Tsy maintsy miasa sy miambina ary miandry ny Tompo Jesôsy isika. Nantsoina isika mba hijoro ho mahatoky, tsy ho voahozongozona ary hitombo hatrany eo amin'ny asan'ny Tompo. Miorina eo amin'i Kristy avokoa ny fanantenantsika. Moa ve ny olontsika manao jery todika ny lasa, mijery ny anio sy ny hoavy, raha mivelatra eo anoloan'izao tontolo izao izany?
Moa ve izy ireo mitahiry ny hafatra fampitandremana nomena azy ireo? Mba zava-dehibe mahasarika ny saintsika ankehitriny ve ny hanadiovana ny fiainantsika, sy ny hanehoantsika ny fitoviantsika amin'Andriamanitra? Izany no tokonv ho fanandraman'ny rehetra izay miditra ho isan'ny antoko izay voasasa sy nofotsiana tamin'ny ran'ny Zanak'ondry. Tsy maintsy tafiana ny fahamarinan'i Kristy izy ireo ary ny anarany dia tsy maintsy voasoratra eo an-dohan'izy ireo. SIM. b. 1, tt 55,56.